आफूलाई धोकेबाज भनेपछि प्रचण्डले ओलीलाई भने : बेइमान र झुटो बोल्न सिपालु – Kantipur Np
आफूलाई धोकेबाज भनेपछि प्रचण्डले ओलीलाई भने : बेइमान र झुटो बोल्न सिपालु
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन १४, २०७८ समय: २०:२१:५४
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बेइमान र झुट बोल्न सिपालुको संज्ञा दिएका छन् ।
यसअघि ओलीले झापाबाट आफूलाई धोकेबाज भनेकामा चित्त दुखाउँदै दाहालले बेइमान र झुट बोल्न सिपालु भनेर जबाफ दिएका हुन् ।
‘प्रचण्ड धोकेबाज भनेछ । यसलाई के जबाफ दिने । मैले नबनाएको भए प्रधानमन्त्री हुनेवाला नै थिएन । माधव, झलनाथ, वामदेवले बजेट आएको भोलिपल्ट ओलीले छाड्नुपर्छ भने । तर मानेनन् ।
कागजमा सही छाप गरेर पनि उल्लंघन गरे । धोका दिए । धोका दिने उनी, धोकेबाज हाम्लाई भन्ने’, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले भने ।
ओली बेइमान हो भन्ने कुरा एमालेका धेरैलाई थाहा भएको दाहालको भनाइ थियो । ‘केही साथीले केपीसँग आत्मसमर्पण गरे । पहिले नेकपा हुँदा दह्रोसँग उभिनुहोस् कामरेड, यो ओली तानाशाह हो भन्ने । अहिले त लुत्रुक्क परेर ओलीसँग जाने, अझ प्रचण्डले पार्टी फुटाउन खोज्ने भन्ने ?’
, प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘केपीलाई निकाल्दा त तिनीहरू नै थिए नि ! अनि, मैले एमाले फुटाउन खोजेको हुन्छ त ? तर, भन्छन् । भन्ने त बेइमान भए भए, सुन्ने र ताली लाउने देखेर हैरान हुन्छु ।’
माओवादी कमजोर हहुँदा अहिले केपी ओली आतंक, कमल थापा आतंक बढेको भन्दै उनले आफूहरूले आक्रामक ढंगले जान जरुरी रहेको बताए । ‘कहाँबाट कहाँ पुगेकाहरूको आतंक छ ।
हामीलाई टुक्राटुक्रा पारेर सिद्धिए भने । टुक्राटुक्रा पर्दा तीन महिनामा सिद्धिन्छ भने । अघिल्लो वर्ष पार्टी एकता गर्दा माओवादी सिद्धियो, प्रचण्डको केही छैन भने तर हामी सिद्धिएनौँ । अब फेरि लड्छौँ । जित्छौँ ।’
Last Updated on: September 30th, 2021 at 8:21 pm